DEG DEG: Al Shabaab hubeysan oo lagu qabtay Muqdisho | WARSOM.COM - Wararka Soomaaliya,warka soomaaliya,Somalia News
Home Wararka DEG DEG: Al Shabaab hubeysan oo lagu qabtay Muqdisho
DEG DEG: Al Shabaab hubeysan oo lagu qabtay Muqdisho
Ciidamada amaanka ee Maamulka Degmada Hiliwaa ee Dowladda Soomaaliya ayaa gacanta ku soo dhigay labo Ruux oo ku hubeysnaa Bistoolado kuwaasi oo la sheegay in ay ka tirsan yihiin Dagaal yahanada Ururka Al Shabaab.
Gudoomiye ku xigeenka Maamulka Degmada Hiliwaa Abshir Maxamed Maxamuud oo Warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in labadan Ruux lagu soo qabtay Hub islamarkaana ay Caawa ku hooyanayaa Saldhiga Degmada.
Waxuu shaaca ka qaaday in ay yihiin Al Shabaab balse Gudoomiye ku xigeenka ayaa tilmaamayt in ay baaritaano kala duwan ku sameynayaa hadii lagu helo in ay ka tirsan yihiin Al Shabaab ay la tiigsan doonaan Sharci.
Ugu dambeyn, Gudoomiye ku xigeenka Maamulka Degmada Hiliwaa ee Dowladda Soomaaliya Abshir Maxamed Maxamuud ayaa qeexay in labadan Ruux ay u soo bandhigi doonaan Saxaafada Muuqaalkooda iyo Hubka lagu soo qabtay iyo waxa ay ka damacsanaayeen Hubkaasi.
Previous articleDhaawacyada Qaraxii Baydhabo oo Muqdisho la keenay+SAWIRO
Next articleKenya: HRW calls, Kenya to end abusive round-ups